Ambongadiny elektrika Silika tsy tantera-drano USB Rechargeable Scrub Fanadiovan-tarehy fanadiovana borosy mpanamboatra sy mpamatsy | Enimei
Miahy ny hoditra
Herinaratra Silika tsy tantera-drano USB Rechargeable Scrub borosy fanadiovana tarehy
1. Ny fingotra ivelany amin'ny Hygienic Soft Silicone ivelany dia manome ny fanasan-tarehy malefaka indrindra sy voajanahary amin'ny tarehy sy ny fanorana amin'ny endrika hoditra rehetra.
2. Makà fahatokiana mazava eo amin'ny tavanao amin'ny endrika manankarena, malefaka kokoa, salama kokoa ary mamirapiratra kokoa. Esory moramora ny makiazy maharitra, ny mason-koditra madio lalina, ahenao ny blackhead amin'ny tanjaka sy ezaka faran'izay kely indrindra mba hahafahanao mamirapiratra amin'ny hoditra vaovao sy mamirapiratra.
3. Ny endriky ny endrika boribory lavalava sy mora ampiasaina izay manamora kokoa ny fikirakirana sy mahazo aina amin'ny fitaterana. Fanadiovana tarehy miaraka amina singa tsotra mitazona tanana, tsy mila manova ny lohan'ilay borosy mihitsy. Fitaovana famandrihana indostrialy. Ny sarany feno dia 3 ora ary azo ampiasaina in-200.
4. Ity vokatra ity dia tsy misy rano IPX7, azo ampiasaina amin'ny fandroana sy fandroana.
1. ketrona mihena
2. hoditra malemy sy mahasalama
3. Famerenana amin'ny laoniny fanorana izay ahafahana mamarana ny andronao.
4. Manala ny hoditra maty mba hampiharihary ny famirapiratan'ny tanora eo ambany.
Malemy ny hoditra ary malefaka ny hoditra
Tsy misy fahasimbana amin'ny hoditra, tsy misy simba amin'ny hoditra
Aza hadio izany.
Re - manadio boribory, manatsara gloss
Tsoahy menaka matevina
Manam-pahaizana manokana momba ny fanadiovana
Manadio, manadio, manadio
Rehefa avy nampiasa
Fanadiovana mahomby sy multi-in-iray
Mamaha olana eo amin'ny tarehy
Ny feo manetsiketsika ny tafo tsy tantera-drano
Madio ny feo
3 karazana andiana macaron
Teo aloha: Borosy vita amin'ny tsiranoka vita amin'ny herinaratra elektrika miaraka amin'ny tanany lava
Manaraka: Masinina maska ​​tarehy maska ​​tarehy masom-bolo mahasalama fonosana DIY Saron-tava
peptide sy hoditra collagen
collagen peptides ho an'ny hoditra
collagen peptides hoditra malalaka
tombontsoa azo avy amin'ny hoditra peptides collagen
collagen takelaka ho an'ny hoditra
Fitaovana fitrohana Comedo ho an'ny hoditra
Fanadiovana hoditra amin'ny fitaovana fanosotra Comedo
peptides sy collagen ho an'ny hoditra
takelaka micro collagen hoditra
Fanitsiana volo seramika mainty vaovao
Mpanamboatra volo manitsy volo manitsy volo ...
Tsy tantera-drano Vibration herinaratra Silika fandroana B ...
Borosy makiazy fototra fananganana tarehy
5 amin'ny 1 vaovao mpanao volo olioly curler Electric ha ...
Mpanala volo mainty tarehy manaisotra fantsom-pitrandrahana ...
© Copyright - 2014-2021: Zo rehetra voatokana.